« E-show »: nomen-danja ny mpiangaly « jazz » | NewsMada
« E-show »: nomen-danja ny mpiangaly « jazz »
Ezaka iray ataon’ny masoivoho amerikanina eto Madagasikara ny manasongadina ny kanto malagasy eo amin’ny tontolon’ny hira. Ry zareo mpiangaly “jazz” no nivahiny tao amin’ny “E-Show”, omaly.
Lafatra ! Izay ny azo ilazana ny fampisehoana « jazz », notanterahina tetsy amin’ny masoivoho amerikanina, etsy Andranomena, omaly tolakandro. « E-show » ny anaran’ny hetsika, tontosaina isam-bolana ka nisantatra ny tamin’ity taona ity ny fiarahan-dry Josia Rakotondravohitra Quartet tamin’i Terry Klemensen.
Tanjon’ny mpikarakara amin’ny « E-show » ny hisian’ny fifanakalozana eo amin’ny mpanakanto malagasy sy amerikanina. Azo lazaina ho tratra sy tsy misy kianina izany, raha ny hita tamin’ity fampisehoana ity. Samy manana ny fototra niaingany sy ny talenta ao anatiny ary ny traikefa eo am-pelatanany ry Njaka Rakotonirainy, mpitendry piano tsy zovina intsony, i Hents, mpitendry gitara beso, i Josia Rakotondravohitra, mpively ampongamaroanaka, ary i Sity Rakoto, tovovavy manam-peo manga, milanto kanefa matanjaka.
Ankilany kosa, i Terry Klemensen, teratany amerikanina, mpitsoka saksofona, efa niara-niasa tamina mpitendry fanta-daza, tany Etazonia any. Samy manana ny maha izy azy izy ireo ary natambatry ny fitiavana mozika « jazz », hany ka namoaka ny kanto indrindra. Singanina manokana ny feon’i Sity, tovovavy mbola tanora dia tanora kanefa ananana fanantenana ny hisondrotany avo eo amin’ity tontolo iray ity.
Vitsivitsy, saingy samy nahaliana sy nanome fahafinaretana ny sofina ny hira nentin’izy ireo an-tsehatra. Mazava ho azy, samy nanombinana ny sanganasan’ireo kalaza amerikanina sy ny an’ny andrarezina malagasy, toy ny « Teny mamy » an’i Tovo J’Hay, nohirain’i Sity tamin’ny gadona « jazz ». Marihina moa fa nifanojo indrindra tamin’ny ankatoky ny “Fetin’ny mpifankatia” ny « E-show », omaly, hany ka hiram-pitiavana avokoa ny natosaka.
Taorian’ny seho, nalalaka ny resadresaka teo amin’ny mpanotrona sy ny mpanakanto. Marihina fa nalefa mivantana tany amin’ny American Corners any Taolagnaro sy any Mahajanga ny hetsika ary nandray anjara tamin’ny dinidinika ihany koa ireo tany an-toerana.